Maxaa ka run ah horumarka Xukuumada ka sheeganeyso shaqo abuurka? – Warfaafiye:
Maxaa ka run ah horumarka Xukuumada ka sheeganeyso shaqo abuurka?
Ali Mohyadin Feb 10, 2018 0
Bulshada Soomaaliya 73% waa faqiir halka 43% oo ka mid ah ay ku adag tahay nolosha. Waxaa intaas sii dheer in ka badan 70% da’ ahaan ka yer yihiin 30 jir oo macnaheedu tahay in dhalinyarada ay ka badan tahay dadka waaweyn. Warbixinta xagga Horumarka ee Aadanaha ee Soomaalia (Somalia Human Development Report) ee 2012 waxay leedahay in ka badan 54% dadka shaqeyn kara Soomaliya (Active Population) waa shaqo la’aan! Waxay kaloo cadeynaysaa warbixinta in da’ yarta u dhaxaysa 14-29 ay 67% ay yihiin shako la’aan.
Sidoo kale in ka badan 40% dhalinta shaqo la’aanta ah waa shaqo doon! Shan sano ka dib war-bixinta oo ay xasilooni daro siyaasadeed iyo amni xumo sii jirto islamarkaana dhowr kun oo arday ay jaamacadaha sanad walba ka qalin jebiyaan maxaa la filan karaa? Jawaabtu waxaa ay tahay in tobanaan kun oo dhalinyaro ah ay shaqo la’aan yihiin.